Iindleko ezisecaleni, yintoni kunye nefuthe layo kwintengiso yezoqoqosho | Ezezimali
Iindleko ezisecaleni, yintoni kunye nefuthe layo kwintengiso yezoqoqosho
USusana Maria Urbano Mateos | | Ezopolitiko
Kwiinkcazo ze ezezimali nezoqoqosho, kukho igama elithetha ukuba kunxulumene kakhulu ne ukuveliswa kwempahla; Eli xesha leendleko ezisecaleni libandakanya ngokwalo iinkcazo ezahlukeneyo ezinike ithuba lokufikelela kwinkcazo yokugqibela, apho Iindleko ezisecaleni linqanaba lotshintsho olukhoyo ngenxa yotshintsho kwimveliso.
Ngamagama alula kancinci ungachaza Iindleko ezisecaleni njengokunyuka okukhoyo kwindleko zemveliso yeyunithi, xa imveliso ngokubanzi inyuka. Ngamagama alula, iindleko ezisecaleni ziphendula umbuzo: Kuxabisa malini kum ukwenza enye iyunithi? Kodwa ukuze siqonde intsingiselo yeli gama ngendlela ebanzi, kubalulekile ukuba siphendule eminye imibuzo, masiqale ngokuhlalutya ukuba indleko zithini.
1 Iindleko ezisecaleni
1.1 Kodwa yintoni efunekayo ukuze ukwazi ukwenza le nkqubo?
3 Iindleko ezisecaleni
Xa sithetha ngemveliso yento elungileyo, sihlala sithetha ukuba ukuthatha inxaxheba ngokudibeneyo kwezinto ezininzi kuyafuneka, ukusebenzisana kwawo kuvumela imveliso eluhlaza iba yimveliso yokugqibela, emiselwe ukuba iwele ezandleni zomthengi wokugqibela.
Kodwa yintoni efunekayo ukuze ukwazi ukwenza le nkqubo?
Thatha umzekelo inkqubo yokuhlanganisa isitulo esilula, esifuna iibhodi, iityhubhu kunye nezikrufu. Inkqubo yendibano ilula, kuba yanele ukuba iityhubhu zijijekile kunye neebhodi ukuze zikwazi ukufumana isitulo esipheleleyo, oku kuthetha ukuba ukuze ukwazi ukudibanisa isitulo kufuneka uthenge izinto ezingasetyenziswanga ngazo yenziwe, okt iibhodi, iityhubhu nezikrufu; Ngale ndlela siyazi ngoku ukuba kukho ifayile ye- iindleko zempahla eluhlaza. Ngoku, makhe sicinge malunga nokuba kuthetha ntoni oku malunga nolunye uhlobo lotyalo-mali.
Ukulungiselela ukudibanisa isitulo, ayisiyonto eluhlaza kuphela efunekayo kodwa ikwangoyena ndoqo wezinto ezibalulekileyo, umntu. Lo mntu waziwa njengomsebenzi okanye umqhubi ngoyena mntu uphetheyo okwazi ukwenza umsebenzi Inkqubo yendibano, Enkosi apho sinokufumana khona usihlalo odibeneyo njengesiphumo sokugqibela; Kwaye into ebaluleke kakhulu kukuba, kutyalo-mali lwezixhobo ezingafunekiyo, ngoku sidibanisa utyalomali kwezabasebenzi, kuba umvuzo onikezelweyo ukuze ufumane abantu bokuqhuba le nkqubo, uthathwa njenge Iindleko zokuvelisa, kodwa ayipheleli apha.
Ukuze umsebenzi akwazi ukuguqula iityhubhu kunye neebhodi kwisitulo esihle, oomatshini bayadingeka ukuze bakwazi ukudibanisa imveliso, oomatshini banokuba, umzekelo, uqheliso kunye nezinye iziseko zokuxhasa ibandla, ukuze Utyalomali kwimveliso iyongezwa iindleko zoomatshini. Kwaye, ngoku, ukuze oomatshini basebenze ngokuchanekileyo kufuneka babe neendawo zombane okanye zombane, ukuze bakwazi ukwenza oomatshini basebenze, oko kuthetha ukuba, kwiyunithi nganye ehlanganisiweyo, kuya kufuneka kulayishwe enye. amandla.
Olunye lotyalo mali olwenziwe ukufikelela kwinjongo yokuvelisa imveliso ethile laziwa njenge iindleko zemveliso. Kodwa azikho kuphela ezi ndleko zikhankanywe apha ngasentla, kukwakho neendleko zokuhamba okanye ukuhambisa, iindleko zolawulo, iindleko zerhafu, iindleko zolondolozo, phakathi kwabanye.
Kwiminyaka yakutshanje kuye kwasekwa ixesha lotyalo-mali, kwaye nangona kwizihlandlo ezininzi sicinga ukuba utyalomali kuxa izitokhwe okanye ezinye izixhobo zemali zithengwa zithengiswa, utyalomali alusoloko luhlobo olo; Kwimveliso, inkqubo yotyalo-mali iyenziwa xa imali ethile yenziwe yafumaneka ukuze ikwazi ukuvelisa into elungileyo. Kwezi meko, imbuyekezo kutyalo-mali olwenziwe inokwahluka kwimiba emininzi, nangona kunjalo, sisiphelo esinye esilandelwayo.
Kutyalo-mali lokuvelisa, sinokuzifumanisa sinethuba ukuthengiswa kwemveliso ethile sele ithandwa, okanye ikwimfuno ephezulu kakhulu; Ukuqhubekeka nomzekelo wokwenziwa kwezitulo, kunokwenzeka ukuba sifumanise ukuba enye yeendawo ezinabathengi abaninzi kukuthengiswa kwezitulo; Nje ukuba lo mmandla wamathuba uchongiwe, lixesha lokuba uqalise ukuthetha ngeprojekthi.
Le projekthi ibhekisa ekucwangcisweni kwayo yonke inkqubo efunekayo ukufezekisa injongo yokugqibela, ethi ithengise inani elithile lezitulo, apho umvuzo oyifunayo. Kungelo xesha lokucwangcisa apho zonke iindleko eziya kungena zichongiwe ukulungiselela ukufezekisa injongo yokugqibela. Ezi ndleko zezotyalo-mali ekufuneka zenziwe.
Ngaphakathi kwamanqaku athathelwa ingqalelo ukuba anakho ukumisela isixa-mali sokugqibela sotyalo-maliSinotyalo-mali kwiziseko zophuhliso, kwaye kukuba ukuze sivelise izitulo zethu siza kufuna indawo ebekelwe ukugcina izinto ezingasivelisiyo; emva koko, indawo iyafuneka ukuze ikwazi ukudibanisa izitulo; Kwaye ke kufuneka indawo yokugcina izitulo esele zihlanganisiwe. Ukongeza koku, indawo iyafuneka kwiiofisi zolawulo nakwizithuthi ekuza kuthunyelwa kuzo imveliso.
Olunye uhlobo lotyalo-mali olwenziwe kule projekthi ziimvume ezifunekayo ukuze zikwazi ukwenzeka ukusebenza ngokuchanekileyo; Kunye noku, kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo utyalomali kwizixhobo zokugcina, eziza kusetyenziswa ukugcina yonke inkqubo kunye nabo bonke oomatshini kunye nezixhobo ezisetyenziswa kwinkampani isebenza.
Ngoku, kwakamsinya nje ukuba ube nenani elipheleleyo lotyalo-mali, injongo kulindeleke ukuba ifikelelwe, kwaye eyona njongo iphambili yenkampani kukuvelisa inzuzo, yiyo loo nto inzuzo yokuthengisa kufuneka idlule kutyalo-mali olwenziweyo. Ngale ndlela sinokucinga ngezi zinto zilandelayo.
Nje ukuba uhlalutyo lwenziwe, kwi-neustra isitulo sefektri Utyalomali olupheleleyo lwe-1 yezigidi ze-euro luyafuneka; kwaye iprojekthi icwangciselwe ukuvelisa izitulo ezingama-100.000 ngonyaka kule minyaka mi-5 izayo; Ukuba sifuna ukwenza inzuzo ngale mveliso, kunyanzelekile ukuba izitulo zithengiswe ngexabiso elivumela ukugubungela utyalo-mali olwenziwe ekuqaleni, kwaye ngexesha lokugcina imveliso, kwaye ke oko kugubungela umda ofanelekileyo wenzuzo. .
Kumzekelo wethu, ucwangciso lubonisa ukuba zizonke izitulo ezingama-500.000 ziyakwenziwa, apho isixa se-1 sezigidi zeerandi satyala imali ekuqaleni, kunye Utyalomali lwenyanga ngokwemivuzo nakwizixhobo eziluhlaza, ezilingana ne-10.000 euro ngenyanga. Ke utyalo-mali lokugqibela yi-1.600.000 euro. Kwaye ukuba umnqweno wethu kukufumana i-15% ngokubhekisele kutyalo-mali lwethu, inzuzo iya kuthi ifike kwi-240.000 ye-euro, eyongeze kutyalo-mali lwethu isinika i-1.840.000 ye-euro iyonke njengesixa sokugqibela esiza kufunyanwa kwintengiso yezitulo. Ke ngokokucwangciswa kwemveliso, isitulo ngasinye kufuneka sithengiswe nge-3.68 euro.
Xa siqhuba iprojekthi, eyona nto yendalo kukuba ne imveliso kunye noqikelelo Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho ibango lokulungileyo lidlula uqikelelo lweprojekthi, ke ukuze ube nexesha lokuphendula, iiprojekthi zenza uqikelelo malunga nokunyuka okunokubakho kwintengiso, ukuze ngamanye amaxesha iindleko zibandakanyiwe ukuze zikwazi ukuxhasa imveliso eyongezelelekileyo, kwezi meko apho iindleko ezisecaleni zisebenza ngeyona ndlela ilungileyo, oko kukuthi: ukuba endaweni yeeyunithi ezingama-500.000 ndifuna ukuvelisa iiyunithi ezingama-500.001, kungakanani, ukongeza kwi-1.840.000 ye-euro, kuya kufuneka utyalomali ukuze ufumane imveliso oyifunayo?
Kubaluleke kakhulu ukuyazi le datha ukuze sazi ixabiso lokugqibela kwezi yunithi, esinokuthi sichaze ngokuchanekileyo ixabiso lentengiso, ukuze iinjongo zeprojekthi zifezekiswe kwaye zigcinwe. Kodwa sazi njani ixabiso elisecaleni?
Ngokwezibalo Iindleko ezisecaleni Imelwe njengesiphumo sexabiso elipheleleyo, phakathi kokuvela kwenani leeyunithi zizonke; Oku kuthetha ukuba indleko ezipheleleyo ezityaliwe ukuze kufumaneke inani elimiselweyo leeyunithi kufuneka zahlulwe ngenani lezona ndawo ziyinene, ukuze zichazwe njengexabiso leyunithi.
Le ndleko iselunxwemeni iluncedo kakhulu xa iiprojekthi zenziwe kuba ngokwembono yemali, eyona ndawo ifanelekileyo iyafumaneka phakathi kwexabiso lemveliso kunye nexabiso lokuthengisa, ukuze ixabiso elifanelekileyo libalwe apho inkampani ingalahli mali, kodwa Sukuhlukumeza umthengi. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuthatha eli xesha kuthathelwa ingqalelo ekucwangcisweni kweeprojekthi zethu kuya kusinceda ukuba nesiphumo esingcono semali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Ezopolitiko kwezoqoqosho » Ezopolitiko » Iindleko ezisecaleni, yintoni kunye nefuthe layo kwintengiso yezoqoqosho
Ngaba kububulumko ukugcina nokugcina imali kwibhanki yaseCatalan?
Kwakhona, iTelefonica emehlweni abaqhubi